संगठनमा सबैको कुरा नसुनिदा विभक्त हुन बाध्य भयौ : देवराज ढकाल
प्रकाशित मिति: 2018/06/10
तत्कालिन नेकपा एमाले निकट पर्यटन व्यवसायीहरुको संगठन राष्ट्रियपर्यटन व्यवसायी संगठनबाट एउटा ठुलो समूहका व्यवसायीहरु छुटिएर पर्यटन व्यवसायी संगठन नेपाल नामक नयाँ संगठन गठन गरेका छन् । एउटा संगठन हुँदा हुदै अर्को संगठनको आवश्यकता किन पर्यो, अवको योजना के हुन्छ लगायतका विषयमा नव गठित पर्यटन व्यवसायी संगठन नेपालका केन्द्रिय सचिव देवराज ढकाललाई गन्तव्य नेपालको ५ प्रश्न ः
एउटा संगठन हुँदा हुदै किन नयाँ संगठन गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो ?
संगठन एक जनाको मात्र होइन । त्यो धेरै व्यक्तिहरु मिलेर बनेको हुन्छ । त्यहाँ सबैको समस्या र गुनासोहरुलाई सुनिनु पर्छ । तर जो नेतृत्वको नजिक छ उसैको मात्र कुरा सुन्ने र उनीहरुको चाहना अनुसार संगठन चलाउन थालेपछि त्यसैका विरुद्ध अर्को संगठन गठन गर्नुपर्ने रैछ । हामी कहाँ पनि त्यही भयो । नेतृत्वको आसेपासेको मात्र कुरा सुन्न थालियो । उनीहरुलाई नै पद दिन थालियो । अरुलाई पाखा लगाउने काम भयो । त्यसैका विरुद्ध हामीले नयाँ संगठन जन्मायौं । त्यसले अहिले आधिकारीकता पनि पाइसकेको छ ।
नेतृत्वले मनोमानी गरेको कुरा गर्नुभयो त्यो भनेको के हो ?
हाम्रो पार्टीले जसलाई पर्यटन विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । हो, उहाँबाटै कोहीलाई काखा र कोहीलाई पाखा लगाउने काम भयो । संगठनमा हाम्रो होइन राम्रोलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । शक्ति छ भन्दैमा सदस्यहरुको कुरै नसुनि पेलेर जाने जुन नीति लिइयो त्यहाँ नै गलत भयो ।
तपाईहरुको संगठन अर्को संगठन भन्दा के फरक छ त ?
हामी कहाँ पर्यटनका पुराना व्यवसायीहरु आवद्ध छन् । अझ त्यसमा पनि अर्को संगठनमा पुरानो समय देखि आवद्ध व्यवसायीहरु पनि हामी कहाँ नै छन् । जसले पर्यटनमा लामो अनुभव हाँसिल गरेका छन् । र, यही क्षेत्रमा केही गर्न चाहनछन् । अझ त्यसमा पनि पर्यटनमा क्रियाशिल महिला, जनजाति लगायतका सबैको सहभागिता रहेको छ ।
नेतृत्वका लागि मात्र नयाँ संगठन निर्माण गरेको हो भन्ने आरोप छ नी ?
भन्नेले केके भन्छन्, हामी त्यसको पछाडि लाग्दैनौ । हामी पर्यटनमा नयाँ केही काम गर्न चाहन्छौ । पर्यटन विकासका लागि राज्यले जुन नीति लिएको छ । त्यसमा सहायक बन्न चाहन्छौ । हामीलाई कुनै पदिय लोभ छैन । यो सबैले बुझे हुन्छ ।
उसो भए त्यसका लागि केके काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो संगठन निर्माण भएको त्यती धेरै समय भएको छैन् । तर पनि हामीले विभिन्न १० वटा कमिटिहरु गठन गरिसकेका छौं । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि राज्यलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने छौं । त्यसका अलवा अन्य विभिन्न कमिटिहरु छन् । तिनले आ आफ्नो क्षेत्रमा केके काम गर्ने भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ । अव छिटै एउटा ठोस कार्ययोजना सहित हामी आउने छौं ।